Manao izay hitiavana ny tena hoe?
"Hoy Jesosy taminy: Izaho no mofon’aina; izay manatona Ahy tsy mba ho noana, ary izay mino Ahy tsy mba hangetaheta intsony." Jaona 6:35
"Koa raha misy olona ao amin’i Kristy, dia olom-baovao izy; efa lasa ny zavatra taloha, indreo, efa tonga vaovao ireo." 2 Korintiana 5:17
-Nandalo fiainana tena sarotrai Felana, ary efa nanandrana namono tena mihitsy aza. Indray hariva izy dia nasaina tamina fivoriana famakiana Baiboly tao amina tokantrano iray, ka nanaiky ny Filazantsara ary nandray an’i Jesosy Kristy tao am-pony. Talanjona izy, nahita izay ambaran’Andriamanitra ao amin’ny Baiboly, ka nifantoka tamin’izay rehetra andinin-tSoratra Masina miresaka ny fitiavan’Andriamanitra sy ny famelan-keloka feno omeny. Takany fa hoe zanak’Andriamanitra izy, ary tonga olom-baovao ao amin’i Kristy.
-Mijoro ho vavolombelona izy: «Ela no nijaliako, fa ankehitriny kosa aho dia mahalala hoe tia ahy fatratra Andriamanitra, ary tsapako bebe kokoa isanandro izany. Efa maty ilay Felana taloha, ary tsy misy intsony. Niara-maty tamin’i Jesosy teo amin’ny hazofijaliana izy. Fai Felana vaovao kosa dia velona, ary tena tiany tokoa.
-Hatramin’izay niainako aho dia nikaroka olona tia ahy sy manaiky ahy amin’izao toetrako izao. Niezaka aho mba hoeken’ny fianakaviako. Niezaka aho mba hahazo ny fon’ny vadiko. Niezaka aho mba ho tian’ny zanako. Niezaka aho mba ho tian’ny namako. Niezaka hatrany aho mba ho tian’Andriamanitra sy hoekeny. Saingy tena sarotra ny mihevitra hoe tiana, nefa ianao aza mahatsapa fa tsy maha te ho tia. Jesosy anefa dia nitia ahy, amin’izao maha izaho ahy izao. Hitako tao aminy ny fitiavana sy fanekena ahy, ary azoko ianteherana mandrakizay izany. Satria aho ankehitriny efa mahafantatra an’i Jesosy Kristy, dia iray tam-po amiko ny kristiana rehetra. Be lavitra noho izay noeritreretiko aza ny fitiavana noraisiko avy amin’izy ireo.»